Ibon Martín: onye ka ọ bụ, otu o si ede na akwụkwọ ndị o bipụtara | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Isi mmalite Ibon Martín: Heraldo de Aragón
Ibon Martín bụ otu n’ime ndị edemede Spanish na-arị elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ akụkọ nwere nzube, ụfọdụ ihe omimi ma karịa ihe niile ahụ nko, nke a bụ otu n'ime ndị ode akwụkwọ ugbu a, akwụkwọ na-apụta, akwụkwọ nke na-enwe mmeri.
Ma, Ọnye na-bụ Ibon Martín? Kedụ akwụkwọ ndị ị dere? Kedu ka mkpịsị odeakwụkwọ gị dị? Y’oburu na inubeghi ya; ma ọ bụ ọ bụrụ na ị maara ya mana ịchọrọ ịmatakwu nkọwa gbasara ndụ ya, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị banyere onye edemede ahụ.
1 Ọnye na-bụ Ibon Martín
1.1 Ibon Martín dị ka onye edemede edemede
2 Kedu ka mkpịsị akwụkwọ gị
3 Akwụkwọ nke Ibon Martín
Ọnye na-bụ Ibon Martín
Isi mmalite: Akwụkwọ akụkọ Basque
Ibon Martín bụ odeakụkọ. Amuru ya na 1976 na Donostia ma mụọ akwụkwọ akụkọ na Mahadum nke Basque Country. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, dị ka ọtụtụ ụmụ klas ya, ọ malitere ịrụ ọrụ. Ọrụ mbụ ya bụ na mgbasa ozi mpaghara, nke nyere ya ohere ma jee ozi dị ka omume iji ihe ọmụma ọ mụtara na ahịa ọrụ.
Ya mere, na ihe otutu mmadu amaghi, bu nke ahu Ibon Martín malitere ide banyere njem. Maka ya, ọ bụ ezi agụụ, n'ihi na ọ hụrụ njem n'anya, na ịnwe ike ịrụ ọrụ n'ihe masịrị gị dị mma mgbe niile. Maka nke a, ọtụtụ afọ ọ raara onwe ya nye na ide na mgbasa ozi gbasara njem na ụzọ. O dere ọtụtụ akwụkwọ njem, ọkachasị ụzọ gasị site na mba Basque. N'ihi ya, ọ ghọrọ otu n'ime ndị ọkachamara kachasị mma na njem nlegharị anya na ntụrụndụ na Basque Country. Ma ọ bụ na akwụkwọ ya abụghị naanị na-elekwasị anya n'akụkụ ụwa a kacha mara amara, kamakwa ha chọtara obere ndị ọzọ amachaghị, nke na-abụghị ndị njem nleta mana nke nwere ihe ịtụnanya ma ọ bụ mee ka ị hụ n'anya karịa ndị nke mbụ. Ọzọkwa, o nyere ọtụtụ ndụmọdụ na ụzọ ndị ọzọ maka ụzọ ma ọ bụ ụzọ esi eme njem, dịka ụgbọ ala ma ọ bụ site n'otu obodo gaa n'ọzọ. Iji mee nke a, o nwere enyemaka nke Álvaro Muñoz Gabilondo, onye edemede ọzọ na mpaghara ebe na ebe ha dere maka ya.
Ibon Martín dị ka onye edemede edemede
Ruo ọtụtụ afọ, Ibon Martín gara n'okporo ụzọ ndị mba Basque ma tinye onwe ya na ibipụta akwụkwọ nduzi iji mee ka ebe ndị a mara, ọkachasị iji weghachite mkpa ha nweburu. Ọ bụkwa site n'akwụkwọ ndị a ka ọ gbanwere echiche nke akwụkwọ mbụ ya, "Ndagwurugwu na-enweghị Aha."
Nke a Ọ chọrọ ịchebe mgbọrọgwụ ya ma jikọtara agụụ ya maka njem na ịmara ihe ndị a na-amaghị na ihe ndị dị mkpa na mpaghara ahụ n'echiche ahụ ọ bu n'uche. na nke nta nke nta ọ pụtara na ihe odide na ibé.
N'ezie, mgbe akwụkwọ akụkọ ahụ gasịrị, ọ gara n'ihu na-ebipụta, na nke a, akwụkwọ anọ, nke edebere na akụkọ ifo na akụkọ ifo nke oke ọhịa Irati, Nordic thril na-atụ egwu ya.
Ka ọ dị ugbu a, ọ gara n'ihu ide ihe. E bipụtara akwụkwọ ya kachasị ọhụrụ, «Oge awa nke seagulls» na 2021 ma ugbu a, ọ na-enwe ihe ịga nke ọma, na-akwado ya dị ka onye isi mgbagha. N'ezie, a na-ewere ya otu a na Spen, mana mba niile tozuru oke ya na ọtụtụ ndị mbipụta si mba ọzọ etinyela uche ha na ya ibipụta ọrụ ha n'asụsụ ndị ọzọ.
Ya mere, anyị hụrụ onye edemede nwere ogologo ụzọ n’ihu ya, onye ji obi ya niile eweta ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ ndị ọzọ.
Kedu ka mkpịsị akwụkwọ gị
Isi mmalite: Huffington Post
Ndị gụrụ Ibon Martín kwenyere na otu nkọwa ahụ: ọ maara otú e si akpọ onye na-agụ ya. Uzo esi gosiputa ya, otu o si gosiputa ndi agwa ya na otu esi akuko akuko na-eme ka ha chere icho iji mara ihe ga-eme ndi odide a, kamakwa ihe omimi ahu nke n’eme ka ndi ogugu.
Ọ na-anọchi maka gburugburu na ndapụta nke ọ na-akọwa, ya mere ezi uche ma bụrụ eziokwu n'ihe a pụrụ ịhụ, na ọtụtụ na-ekpebi oge ụfọdụ ịga ebe ndị ahụ iji hụ ha n'onwe ha (ikekwe n'ihi mmekọrịta ha na akwụkwọ njem m dere na mbụ).
Tụkwasị na nke a, obi abụọ adịghị ya na ọ na-eme ọtụtụ nyocha maka akwụkwọ akụkọ ya, dịka nkọwa na ụzọ esi eme ihe odide ahụ, yana nkata na ihe omimi n'onwe ya, nwere ntọala. N'ihi nke a, ọ na-etinye oge dị ukwuu na-enyocha onwe ya iji nwee ike ịkọwapụta akwụkwọ akụkọ ahụ nakwa na enweghị eriri dị larịị nke nwere ike "ọgbaghara" onye na - agụ ya.
Akwụkwọ nke Ibon Martín
Ọ bụrụ na ị ka zutere onye edemede ahụ ma chọọ ịmata akwụkwọ ndị o dere, anyị ga-agwa gị na o nweghị ọtụtụ na ahịa. Ma. Ma ọ bụ na ọrụ ọgụgụ ya malitere na 2013, mgbe ọ bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya, "Ndagwurugwu na-enweghị aha."
Onye edemede a, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, naanị na-ebipụta otu akwụkwọ n'afọ, na ekwesiri iburu n'uche na na 2018 o bipụtaghị, yabụ anyị ga - akwụ ụgwọ ya akwụkwọ 7 nke onye dere ya. Ndị a bụ:
Ndagwurugwu na-enweghị aha.
Ihe ngosi nke ịgbachi nkịtị.
Ikpeazụ ọgbụgba ndụ.
Egwú nke tulips.
Oge awa nke ọdụ ụgbọ mmiri.
A ghaghi ikwu na anọ n'ime akwukwo ndia - Egwuregwu Tulip, Oghere Nnu, Ikpeazụ Akelarre na Onyunyo orylọ ọrụ - bụ akụkụ nke nchịkọta Lighthouse Crimes.
Anyị nwere ike ịkọwapụta site na akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ, na Tulip Dance mere ya na ndepụta ndị kacha ere ahịa, nke mere ka ọrụ ya gbagoro n'ụzọ meteoric na ọtụtụ malitere ịhụ ya ka ọ pụta n'etiti ụdị egwu ahụ n'ime na nke obodo. Agbanyeghị, ọ bụ mgbe oge ruru maka nnụnnụ mmiri ka ọ nwetara aha nke inwe obi amamikpe.
Ugbu a ị matara Ibon Martín ntakịrị, ọ bụ oge na, ọ bụrụ na ịgụbeghị ihe ọ bụla gbasara ya, a na-agba gị ume ime ya. Nwere ike ịmalite na akwụkwọ akụkọ mbụ ya, wee si otú a ghọta mmalite nke pen pen ya. Ma ị nwekwara ike ịmalite na nke ikpeazụ edepụtara ma, ọ bụrụ na-amasị gị, chọọ ndị gara aga. Ewezuga akwụkwọ anọ ndị mebere The Lighthouse Crimes, ndị ọzọ nwere ike ịgụ n’adabereghị. Ọ bụrụ na ị maraworị ya ma gụọ ya, ị kwadoro akwụkwọ ya karịa nke ọzọ? Anyị ga-achọ ịnụ gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ibon Martin
Carlos Ruiz Zafón: akwụkwọ
María Dueñas: akwụkwọ